Udub-u-kicinta xilligii masiibo ee xagga ganacsiga e-commerce waxay la timid himilooyin macaamiil oo la beddelay Mar alla markii lagu daro qiime, ku-shubashada khadka tooska ah ayaa hadda noqotay barta koowaad ee macaamiisha taabashada inta badan dukaamada tafaariiqda. Iyo sida mashiinka ugu weyn ee isdhexgalka macaamiisha, muhiimada ay leedahay taageerada macmiilka dalwaddu waa mid aad u sareeya. Adeegga macaamiisha e-commerce wuxuu la yimaadaa caqabado iyo culeysyo cusub. Marka hore, macaamiisha guriga ayaa waqti badan ku bixinaya khadka tooska ah intaysan qaadan go'aannada iibsigooda. 81% jawaabeyaasha ayaa baaray